आइतबार मे 2, 2021 |
आइतबार मे 2, 2021
विषय — विषय- अनन्त सजाय
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: यशैया 43 : 1
“"याकूब, तिमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। इस्राएल, तिमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। अनि अब परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “तिमीहरू नडराऊ! मैले तिमीहरूलाई बचाएँ। मैले तिम्रो नाउँ राखे। तिमी मेरो हौ।"”
उत्तरदायी पढाइ: लूका7: 37-39, 44-48
37 त्यो शहरमा एउटी पापी स्त्री थिई। त्यसले येशूलाई फरिसीको घरमा खाना खाएको थाहा पाई। त्यसले एउटा सिंगमरमरको भाडामा केही सुगन्धितबस्तु लिएर आई।
38 त्यो येशूको पछि चरण छेउमा रुँदैं उभिइ। त्यसले आफ्नो आँसुले येशूको चरण भिजाउनु थाली। त्यसले चरणमा म्वाँई खाई अनि सुगन्धित खनाइदिई।
39 त्यो फरिसी जसले पनि यी सब देखे। उसले मनमनै सोचे, “यदि यो मानिस अगमवक्ता हुँदो हो, उसले जान्ने थियो कि त्यो स्त्री जसले उसको पाऊ छुइरहेकी छे ऊ को हो अनि कुन स्तरकी हो? किनभने त्यो पापीनी हो।
44 त्यसपछि उहाँले त्यस स्त्रीलाई हेरेर शिमोनलाई भन्नु भयो, तिमिले यो स्त्रीलाई देख्यष्ठ्वौ? जब म तिम्रो घरमा आएँ, तिमीले मेरो खुट्टा धुन पानी दिएनौ। तर त्यसले मेरो खुट्टाहरू त्यसको आँसुले धोइ दिई अनि केश राशिले पुछिदिई।
45 तिमीले मलाई म्वाँई खाएनौ, तर उसले पुछिदिई।
46 तिमीले मेरो टाउकोमा तेल घसिदिएनौ, तर उसले मेरो चरणमा सुगन्ध दलिदिई।
47 यसकारण म तिमीलाई भन्दछु कि उसको धेरै पापाहरू क्षमा भयो। यति स्पष्ट छ कि उसले धेरै माया देखाई। जसलाई कम्ति पाप क्षमा गरिन्छ उसले कम्ती माया पोखाँउछ।
48 त्यसपछि येशूले स्त्रीलाई भन्नु भयो, तिम्रो पापहरू क्षमा भएको छ।
1. यर्मिया 31 : 3
3 टाढाबाट परमप्रभु आफ्ना मानिसहरू अघि देखा पर्नु हुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई त्यस्तो प्रेमले प्रेम गरें जुन सर्वदा रहीरहन्छ। यसर्थ मैले तिमीहरूलाई मेरो विश्वासयोग्यता कायम राखेको छु।
2. योएल2: 12, 13, 25, 27
12 परमप्रभु भन्नु हुन्छ, अहिले पनि तिमीहरु सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रूँदै र शोक गर्दै म तिर फर्क ।
13 लुगा होइन, तिमीहरु को हृदय फटएर परमप्रभु तिमीहरुका परमेश्वरकहाँ फर्केर आऊ। उहाँ दयालु अनि करूणामय हुनुहुन्छ। उहाँ चाँडै रिसाउनु हुन्न। उहाँ को प्रेम महान छ, दण्ड दिने बिषयमा उहाँले जो निर्णय लिनु भएको छ त्यो उहाँले परिवर्तन गर्न सकनु हुछ।
25 म परमप्रभुले मेरो शक्तिशाली सेना तिमीहरुको बिरुद्धमा पठाएको थिएँ। ती काट्ने सलहहरु, ती बगाले सलहहरु अनि उफ्रने सलहहरुले तिम्रा सबै अन्नहरु खाईदिए। तर म परमप्रभु ती सबै नोक्सान भएको फेरि भरपूर गरिदिनेछु। तिमीहरु फेरि भरिभराऊ हुनेछौ।
27 अनि तिमीले थाहापाउनेछौ म इस्राएलको बीचमा छु। अनि फेरि तिमीले जन्नेछौ म परमप्रभु तिमीहरुको परमेश्वर हुँ र म वाहेक अर्को कुनै परमेश्वर छैन। मेरा प्रजाहरु फेरि कहिल्यै लज्जित हुनेछैनन्।
3. यशैया 43 : 25
25 म, उही हुँ, जसले तिमीहरूका सारा पापहरू धोई पखाली दिएँ। मैले यी सबै स्वयंलाई खुशी पार्नलाई गर्दछु। म तिमीहरूका पापहरू सम्झने छैन्।
4. लूका 4: 14 (येशू) (तिर :)
14 येशू पवित्र आत्माको शक्ति लिएर गालीलमा फर्कूनु भयो।
5. लूका5: 1, 4-6,7(र भरियो), 8, 10 (र येशू), 27, 29-32
1 येशू गेनेसरेत झीलको किनारमा उभिनु भयो। उहाँको वरिपरि धेरै मानिसहरू भीड लाग्दै थिए। तिनीहरू परमेश्वरको वचन सुन्न चाहन्थे।
4 जब येशूले आफ्नो भनाई सक्नु भयो, उहाँले शिमोनलाई भन्नु भयो, “यो डुङ्गालाई गहिरो पानी तिर लैजाऊ अनि माछा मार्नु जाल फिजाऊ।
5 शिमोनले उत्तर दिए, गुरूज्यू हामीले सारा रात परिश्रम गर्यौ र पनि एउटै माछा समात्न सकेनौं। तर किनभने तपाईंले भन्नुभयो, म जाल फिजाउँछु।
7 ...अनि डुङ्गामा यति माछा लादे कि डुङ्गाहरू डुब्न थाले।
8 थुप्रै माछाहरू समातेकोमा माछावालाहरू सबै नै छक्क परेका थिए। जब शिमोन पत्रुसले यी सब देखे, तिनले येशूको अघि दण्डवत गरे अनि भने, मदेखि टाढा जानूहोस, परमप्रभु। म पापी मानिस हुँ।
10 येशूले शिमोनलाई भन्नुभयो, डराउनु पर्दैन अब उसो तिमीहरू माछा मार्ने छैनौ तर मानिसहरू समात्ने छौ।
27 यसपछि येशू बाहिर जानु भयो अनि कर-कार्यालयमा एकजना कर-संग्रहकर्त्तालाई बसिरहेको देख्नु भयो। त्यसको नाउँ लेवी थियो। येशूले त्यसलाई भन्नु भयो, मेरो पछि लाग।
30 तर फरिसहरू र तिनीहरूका शास्त्रीहरू उहाँको चेलाहरूको विरुद्धमा यसो भन्दै गनगनाउन लागे, तिमीहरू कर उठाउनेहरू र पापीहरूसित किन खान पीन गर्छौ?
31 येशूले उत्तर दिनु भयो, निरोगीलाई वैद्यको आवश्यक पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र वैद्यको आवश्यकता पर्छ।
32 म धार्मिक मानिसहरूलाई बोलाउनु आएको होइन, म त पापीहरूलाई तिनीहरूका हृदय र रहन सहन परिवर्तन गर भनी अह्राउनु यहाँ आएको हुँ।
6. लूका 15 : 1,7(खुशी), 11-22, 25 (तिर:), 28-32
1 अनेकौं महसूल उठाउनेहरू र पापीहरू येशूकहाँ उहाँबाट सुन्न आए।
11 त्यसपछि येशूले भन्नुभयो, एकजना मानिसको दुइ पुत्रहरू थिए।
12 कान्छो छोरोले आफ्नो बाबुलाई भन्यो, पिता हाम्रो सम्पत्तिमा मेरो भागमा जे जति अंश पर्छ मलाई दिनुहोस्।
21 छोरोले तिनलाई भन्यो, हे पिता, मैले परमेश्वर र तपाईंको अघि पाप काम गरेको छु। म तपाईंको छोरो भनिनु अब उसो योग्यको छैन।
25 उसको जेठो छोरो खेतमा थियो।
32 हामी सबै खुशी होऊ र भोजन गरौं। किनभने तिम्रोभाई मरेको थियो अनि जिउँदो फर्की आएको छ। ऊ हराएको थियो तर अहिले पाइएको छ।
7. भजनसंग्रह 119: 176 (तिर 1st ;)
176 म हराएको भेंडा सरह भड्किरहें। हे परमप्रभु, आएर मलाई खोज्नु होस्। म तपाईंको दास हुँ, अनि मैले तपाईंको भरोसा भुलेको छैन।
8. भजनसंग्रह 25 :5(तिर;), 6-8
5 बाटो देखाउनु होस् र मलाई तपाईंको सत्यताहरू सिकाउनुहोस्। तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। म दिनहुँ तपाईंमा भरोसा गर्दछु।
6 हे परमप्रभु, तपाईंको कृपाको सम्झना ममाथि सधैं रहोस्, मलाई प्रेम देखाउनु होस् जो तपाईंसँग सधैं छ।
7 ती मेरा पापहरू र दुष्टतापूर्ण कामहरू नसम्झनु होस् म जुन जवानी हुँदा गरेको थिएँ। हे परमप्रभु, तपाईंको शुभनाउँको लागि, मलाई प्रेममा सम्झना गर्नुहोस्।
8 परमप्रभु साँच्चै असल अनि इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँले पापीहरूलाई ठीक मार्गमा बाँच्ने तरिका सिकाउनु हुन्छ।
9. यशैया 55 : 7-9
10. यशैया 44 : 21 (म) (तिर;), 22
21 मैले तिमीलाई बनाएँ!
22 तिम्रो पापहरू ठूलो बादल जस्ता थिए तर मैले ती पापहरू पखालिदिएँ। तिम्रा पापहरू मेटिएर गए, जसरी बादल पातलो हावामा हराउँदछ। मैले तिमीलाई जोगाएँ अनि बचाएँ यसैले तिमी फर्केर मकहाँ आयौ।
प्रेमको डिजाइन पापीलाई सुधार गर्नु हो।
ईश्वरीय प्रेमले मानिसलाई सुधार्छ र शासन गर्छ। पुरुषले माफी दिन सक्छ, तर यो ईश्वरीय सिद्धान्तले पापीलाई सुधार गर्दछ।
पापको परिणामको रूपमा कष्ट भोग्नु पापलाई नाश गर्ने माध्यम हो। भौतिक जीवन र पापको विनाश नभएसम्म पापमा आनन्दित हुने प्रत्येक दुःखकष्टले यसको पीडाको समानता भन्दा बढी प्रदान गर्दछ। स्वर्गमा पुग्न, अस्तित्वको सद्भाव, हामीले अस्तित्वको ईश्वरीय सिद्धान्त बुझ्नुपर्दछ।
"भगवान प्रेम हुनुहुन्छ।" यस भन्दा बढि हामी सोध्न सक्दैनौं, जति हामी देख्न सक्दैनौं, हामी जान सक्दैनौं। मानौं कि परमेश्वरले दयालाई माफी माग्नुहुन्छ वा सजाय दिनुहुन्छ जस्तो कि उसको कृपा खोजिएको छ वा खोजिएको छैन, प्रेमलाई गलत अर्थ लगाउनु हो र प्रार्थनालाई गलत कार्यको लागि सुरक्षा वाल्भ बनाउनु हो।
3. 362 : 1-7, 11 (यो)-12
लूकाको सुसमाचारको सातौं अध्यायमा यो कुरा सम्बन्धित छ कि शिमोन शिमोन भन्दा बिलकुलै फरक भए पनि येशू कुनै समय फरिसीको एउटा अति विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्थ्यो जसको नाम शिमोन थियो। तिनीहरू मासुमा हुँदा, एक अनौंठो घटना घटित भयो, मानौं पूर्वीय उत्सवको दृश्यमा अवरोध आयो। एक "अनौंठो आइमाई" भित्र आई। ... यो आइमाई (मरियम मग्दाले, जसलाई उनी बोलाइएकी छे), येशू कहाँ आई।
4. 363 : 8-15, 21 (र)-31
के येशूले त्यस महिलालाई त्यागे? के उनले उनको पूजालाई भंग गरे? होईन! उनी दयालु हुँदै उनको आदर गर्थे। न त यो सबै थियो। आफू वरपरका मानिसहरूले के भन्न खोज्दै थिए भनेर थाहा पाउँदा, विशेष गरी उनको पाहुनालाई - कि तिनीहरू आश्चर्यचकित भएका थिए कि एक अगमवक्ता भएर, उच्च पाहुनाले एकैचोटि त्यस आइमाईको अनैतिक स्थिति पत्ता लगाउन सकेन र उनलाई बिदा लिन लगाए - तर यो कुरा जानेर येशूले तिनीहरूलाई हप्काउनुभयो। छोटो कथा वा दृष्टान्त संग। ... र यसैले सबैलाई घर फर्काई ल्यायो र त्यस महिलालाई "यो तपाईंको पाप क्षमा भयो" भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
किन उनले ईश्वरीय प्रेमको लागि उनको ण ण सारांश गरे? के उनी पश्चाताप र सुधार गरीरहेकी थिइन, र के उनको अन्तरदृष्टिले यो नखोजेको नैतिक विद्रोह पत्ता लगायो? उनले आफ्नो आँसुले उनको खुट्टा नुहाइदिनू र उनलाई तेलले अभिषेक गर्नु अघि। अन्य प्रमाणहरूको अभावमा, उनको शोक उनको पश्चाताप, सुधार, र बुद्धिको वृद्धि को आशा लाई पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण थियो?
यस्तो अप्रभावी स्नेह, फरिसीको आतिथ्य वा मग्दालेनको संकुचनलाई उच्च श्रद्धांजलि कसको थियो? यस प्रश्नको उत्तरमा येशूले आत्म-धर्मीको हप्काउनुभएको थियो र पश्चाताप गर्नेको खण्डन गरी घोषणा गर्नुभयो।
6. 473 :4(सत्य)-7
सत्य, भगवान, त्रुटि को पिता छैन। पाप, बिमारी, र मृत्यु त्रुटि को प्रभाव को रूप मा वर्गीकृत गर्नु पर्छ। ख्रीष्ट पापको विश्वासलाई नष्ट गर्न आउनुभयो।
7. 497 :9(हामी)-12
हामी पापको विनाशमा पापलाई क्षमा माग्ने र दुष्टलाई अव्यावहारिक रूपमा हटाउने आध्यात्मिक समझलाई स्वीकार गर्दछौं। तर जबसम्म पाप विश्वासमा चल्दछ त्यो दण्ड हुन्छ।
8. 327: 1-7, 9-13 (तिर 2nd.)
सुधार बुँदाहरूमा कुनै अमर सुख हुँदैन भनेर बुझेर, र विज्ञान अनुसार राम्रोको निम्ति स्नेह प्राप्त गरेर पनि आउँदछ, जसले अमर तथ्यलाई प्रकट गर्दछ कि न त सुख, कष्ट, भूक वा जुनून, न त आनन्द वा पीडा, भूक वा जुनून, मा उपस्थित हुन सक्छ वा पदार्थको, जबकि ईश्वरीय मन र खुशी, दुख, वा डर को गलत विश्वासहरु लाई नष्ट गर्न सक्छ र मानव मन को सबै पापी भूक।
ईभिल कहिलेकाँही सहीको मान्छेको उच्च अवधारणा हो, जब सम्म उसको राम्रो ज्ञानको बृद्धि हुँदैन। त्यसोभए, उसले दुष्टतामा सुखविलास गुमाउँछ र त्यो उसको कष्ट हो। पापको दु: खबाट उम्कने उपाय पाप बन्द गर्नु हो। अरु कुनै उपाय छैन।
यो विश्वस्तता, पापमा कुनै खुशी छैन, क्रिश्चियन विज्ञानको धर्मशास्त्रको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू मध्ये एक हो। पापीलाई पापको यो नयाँ र वास्तविक दृष्टिकोणमा जगाउँनुहोस्, उसलाई देखाउँनुहोस् कि पापले कुनै प्रसन्नता पाउँदैन, र यो ज्ञानले उसको नैतिक साहसलाई सुदृढ पार्छ र खराबलाई निपुण बनाउने र असललाई प्रेम गर्ने क्षमतालाई बढाउँदछ।
10. 405 : 1 मात्र
आधारभूत त्रुटि नश्वर दिमाग हो।
नैतिक प्रश्नले बिरामीलाई निको पार्नमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। लुर्किंग त्रुटि, अभिलाषा, ईर्ष्या, बदला, कुकर्म, वा घृणा सदाको लागि वा रोगमा विश्वास सिर्जना गर्दछ। सबै प्रकारका त्रुटिहरू यस दिशातर्फ झल्काउँछन्। तपाईको वास्तविक मार्ग भनेको दुश्मनलाई नष्ट गर्नु हो, र परमेश्वर, जीवन, सत्य, र प्रेमको लागी छोड्नुहोस्, परमेश्वर र उनका विचारहरू मात्र वास्तविक र सामञ्जस्यपूर्ण छन् भनेर सम्झना गर्दै।
मानिसको पापले पापमा कुनै सन्तुष्टि पाउँदैन, किनकि पापलाई कष्ट भोग्नलाई परमेश्वरले सजाय सुनाउनुभएको छ। हिजोको नेक्रोमेन्सीले आजको मेसमरिजम र सम्मोहनवादको पूर्वचित्रण गर्‍यो। मतवालाले उसले मतवालापनको आनन्द लिन्छ भन्ने सोच्दछ, र तपाईले असन्तुष्ट व्यक्तिलाई आफ्नो नीलोपन छाड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म उसको शारीरिक खुशीको भावना उच्च स्तरमा प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि उनी आफ्नो कपबाट फर्कन्छन्, चकित सपना देख्ने जसले विकृतिभंग दुखाइको कारण हुने इन्क्युबसबाट ब्यूँझन्छ। गलत काम गर्न मन पराउने मानिस - यसमा रमाइलो पाउन र परिणामबाट डराएर मात्र यसबाट अलग रहन्छ - न त शीतोष्ण मान्छे हो न भरोसायोग्य धर्मवादी।
पदार्थको सपोस्टिटिभस जीवनमा विश्वासको तीखो अनुभव, साथै हाम्रो निराशा र अन्तहीन पीडाले हामीलाई थकित बच्चाहरू जस्ता ईश्वरीय प्रेमको हतियारमा परिणत गर्दछ।
जब हामी ईश्वरीय सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा बुझ्छौं, हामीसँग उहाँ बाहेक अरू कुनै दिमाग हुँदैन, कुनै प्रेम, ज्ञान, वा सत्यता, जीवनको अन्य कुनै भावना, र पदार्थ वा त्रुटिको अस्तित्वको कुनै चेतना हुँदैन।
14. 339 : 1 (को)-4
पापको विनाश क्षमाको ईश्वरीय विधि हो। ईश्वरीय जीवनले मृत्युलाई नष्ट गर्दछ, सत्यले त्रुटिलाई नष्ट गर्दछ, र प्रेमले घृणालाई नष्ट गर्दछ। विनाश हुनाले पापलाई क्षमाको कुनै रूपको आवश्यक पर्दैन।